Okuhle Kakhulu Nge Wire Transfer Yase niNgizimu Afrika
Ikhaya / Izindlela zokukhokha / amakhasino e-inthanethi amukela i-wire transfer
Amakhasino E-inthanethi Amukela i-Wire Transfer
Ukudlulisa imali ngebhange noma i-wire transfer ngenye yezindlela ezinokwethenjelwa kakhulu ngabasebenzisi bekhasino baseNingizimu Afrika zokwenza izinkokhelo ku-inthanethi futhi yamukelwa zinhlobo eziningi zamakhasino e-inthanethi.
Nakuba ingasheshi njengezinye izindlela ezitholakala manje, njengekhadi lesikweleti noma i-ewallet, ukusebenzisa i-wire transfer ukwenza inkokhelo ekhasino kuyindlela ongathembela kuyo. Le ndlela, ebizwa nge-SWIFT transfer ngezinye izikhathi, ikuvumela ukuthi uthumele imali usebenzisa umyalelo webhange. Imali ithathwa yibhange lakho ku-akhawunti yakho yasebhange bese ithunyelwa ku-akhawunti yekhasino. Nakuba zikhona ezinye izindleko, lokhu kusho ukuthi asikho isidingo sokufaka imniningwane yakho yezezimali kusayithi yekhasino.
Uma kuziwa ekuqinisekiseni ukuphepha kwemininingwane yakho yezezimali emakhasino e-inthanethi amukela irandi (i-ZAR), i-wire transfer ingahlangabezana nezidingo zakho. Ukukhetha i-wire transfer kusho ukuthi awuqali kudlala imidlalo oyifunayo ngokushesha, kepha iqinisekisa cishe ngo-100% ukuthi akudingeki ukhathazeke ngokuthi izigebengu ze-inthanethi zintshontsha imininingwane yakho eyimfihlo yezezimali.
Uma usukhethe ukwenza izinkokhelo nge-wire transfer, awudingi ukubheka kude ukuthola amakhasino e-ZAR amukela i-wire transer. Eqinisweni, sikufunele sabhala phansi ngezansi amakhasino aseNingizimu ephezulu amukela i-wire transfer.
Amakhasino E-inthanethi Amukela i-Wire Transfer Esiwancomayo:
Indlela ama-wire transfer asebenza ngayo Emakhasino aseNingizimu Afrika
Uma uzithola udidekile ngokuthi ama-ewallets asebenza kanjani, noma ungakhulukekile ngokushiya imininingwane yakho yezezimali ekhasini likakheshiya ekhasino, i-wire transfer ikulungele. Ukwenza izinkokhelo nge-wire transfer kudinga ukuthi ushayele ibhange lakho ucingo bese ulinika umyalelo wokuthi lithathe inani elithile lemali ku-akhawunti yakho yasebhange ilithumele ku-akhawunti yasebhange lekhasino ye-inthanethi yaseNingizimu Afrika. Nakuba lokhu kuyindlela elula yokukubuka, kunezinye izindlela ezimbalwa ze-wire transfer ongazikhetha eziyinkimbinkimbi, kepha ziyashesha futhi zilula.
Uma ufuna ukukhetha, ungenza i-wire transfer esheshayo. Lolu hlobo lokukhokha lunenqubo ehlukile yokuqinisekisa evumela ibhange lakho ukuthi likhiphe imali cishe ngokuphazima kwehlo. Uma ukhetha le ndlela, uzodinga ukwenza umyalelo wocingo ojwayelekile ebhange lakho bese unikeza ikhasino imininingwane ye-akhawunti neyenkokhelo, kepha lolu hlobo lokwenza izinkokhelo alusebenzi kahle uma inhloso yakho yokugcina ukuzifihla. Uma izinkokhelo ezisheshayo zibalulekile kuwe, i-ewallet noma ikhadi lesikweleti yindlela engcono yokukhokha ongayisebenzisa.
Ukukhipha imali kalula emakhasino e-wire transfer
Inkundla eyodwa lapho i-wire transfer ehamba phambili, ngaphandle kwe-Neteller, ngeyokukhipha imali. Ukuphepha kokusebenzisa ama-wire transfer kusho ukuthi awukhathazeki ngokuntshontshwa kwemininingwane yakho yezezimali futhi imali ekhishiwe ifakwa ngqo ku-akhawunti yakho yasebhange. Lokhu kusho ukuthi azikho izindlelko ezengeziwe, njengamakhadi esikweleti, futhi azikho izindleko zokukhipha imali ze-ejenti, njengoba kusenzeka uma usebenzisa ezinye izinhlelo ze-ewallet.
Okuhle, okubi kanye nesikhathi
Ama-wire transfer anezinzuzo eziningi, kodwa anezinkinga zawo futhi. Mhlawumbe uyanaka lapho uvakashela amakhasino e-inthanethi amukela i-wire transfer ukuthi le ndlela yokukhokha ayikho phezulu ohlwini lwezintandokazi. Nakuba abanye abantu bekhetha i-wire transfer ikakhulukazi ngoba iyindlela yokukhokha ephephe kakhulu nethembekile, abanye abaningi bakhetha ukungayisebenzisi ngenxa yezizathu ezimbili ezinkulu.
Isizathu sokuqala sokuthi abantu bakhethe ezinye izindlela zokukhokha ukuthi i-wire transfer ithatha isikhathi eside. Kulezi zinsuku, abantu bahlushwa ngukwesaba ukuphuthelwa, futhi bafuna konke kwenzeke ngokushesha. I-wire transfer ayisizi ngalokho futhi ama-wire transfer ku-akhawunti yakho yemali yangempela angathatha izinsuku ezimbili kuya kwezinhlanu. Lokhu kungaba ngenxa yokuthi ibhange kufanele lenze inqubo ethile ukuqinisekisa ukuthi awekho amathuba okukhwabanisa, okufanele kukulethele ukuthula kwengqondo kodwa awukwazi ukuvula imidlalo ngokushesha.
Ama-wire transfer aza nezindleko ezengeziwe futhi ngokuya kwenani lemali oyidlulisayo, ungamosha imali eningi kulezo zindleko zebhange. Lokhu kungase kungabonakali kulungile uma kubhekwa ukuthi yimali yakho, kepha amabhange afanele akhokhele izindleko zawo, futhi ngalokho azokukhokhisa ukusebenzisa le ndlela yokukhokha njengoba kunomsebenzi omningi okufanele wenziwe ohlangothini lwawo.